February 2011 – လောကချမ်းသာ
LokaChantha February 23, 2011 Uncategorized No Comments on ဓမ္မာရုံ ယောဂီဆောင် ဆောက်လုပ်ရေး (၂၃-ဖေဖော်ဝါရီ-၂၀၁၁) Read More...
….. ဘုရားကိုယ်တော်မြတ် ရွှေနှုတ်တော်က ‘အညာသိ ဝတ ဘော ကောဏ္ဍညော၊ အညာသိ ဝတ ဘော ကောဏ္ဍညော – အို အချင်းတို့ .. အရှင်ကောဏ္ဍညသည် သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကို သိခဲ့လေပြီတကား၊ အို အချင်းတို့ .. အရှင်ကောဏ္ဍညသည် သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကို သိခဲ့လေပြီတကား’ ဥဒါန်းကျူးရင့်တာကို စွဲပြီးသကာလ နောက်တချိန်၌ အရှင်ကောဏ္ဍညကို ‘အညာသိကောဏ္ဍည’လို့ ခေါ်တယ်။
ဘာပြုလို့ အစဆုံး ကျွတ်တမ်းဝင်တုန်း။ အတိတ်ဘဝက သူ့ကောင်းမှုတွေ […]
LokaChantha February 15, 2011 Uncategorized No Comments on အညာသိကောဏ္ဍညဟု တွင်ရခြင်းနှင့် အလှူဦး ကိုးမျိုး Read More...
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ တရားတော်ကို အလွန်လေးစားသော ရတနာသုံးပါးကို အမြဲမပြတ် ဆည်းကပ် ကိုးကွယ်လေ့ရှိသူ ဦးသာဝင်းသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ရှေးဦးစွာ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ္တန်နှင့် အနတ္တလက္ခဏသုတ္တန်တို့ကို ပါဠိ-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ဘာသာတို့ဖြင့် တစ်အုပ်တည်း ပေါင်းကာ ထုတ်ဝေလိုသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ အသစ်တဖန် ဘာသာပြန်ရန် ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်အား တောင်းပန်ခဲ့ပြီး၊ ယခု ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ပြန်၍ ရေတွက်သော် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ က ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားဦး၊ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ၁၈၉၄ ခုနှစ် (သက်တော် ၄၈၊ ဝါတော် ၂၈)တွင် ပါဠိဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ သိလွယ် ထင်လွယ် မြင်လွယ် သဘောပေါက်လွယ်သော မြန်မာဘာသာပြန်၊ ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်၏ ၁၉၇၃ ခုနှစ် (အသက် […]
LokaChantha February 11, 2011 Uncategorized No Comments on ‘ဒုက္ခသစ္စာ’နှင့် ‘ဒုက္ခသစ္စာ၌သစ္စဉာဏ်’ ဘာသာပြန် Read More...
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ သိတော်မူပုံကား –
၂။ ‘ဤဒုက္ခတရားသည် […]
LokaChantha February 7, 2011 Uncategorized No Comments on သစ္စာသိပုံ ဉာဏ်မျိုးစုံ နှင့် ဘဝပန်းလေး မနွမ်းစေချင် Read More...
စိတ်ကို အနားပေးခြင်း – အရှင်ဣန္ဒက
အရုဏ်ဆွမ်းကပ်ရင် ဆွမ်းမှတပါး […]
LokaChantha February 1, 2011 Uncategorized No Comments on စိတ်ကို အနားပေးခြင်း – အရှင်ဣန္ဒက Read More...
The Original Suffering – Ven. Ashin Intaka
Before talking about the cause of suffering, we should first learn what suffering is. Suffering isapart of our life. It is inseparable with life. Suffering starts from the time of conception (birth) although the baby in the womb cannot sense it. If we think about his situation, we can understand his difficult life […]
LokaChantha February 1, 2011 Uncategorized No Comments on The Original Suffering – Ven. Ashin Intaka Read More...